A mostani virtuális magánhálózat (VPN) a szomáriai lohahevitra mafana amin’izao fotoana izao satria ny tsiambaratelo aterineto dia miditra anaty afo avy amin’ny lalana maro. Ny orinasa dia miezaka manangona antontam-baovao maromaro kokoa amin’ny mpampiasa azy ireo raha toa ka manjary manjavozavo loatra izy (Tadiavo ohatra? Izany, izany, izany, ary izany) raha mizara ny fomba hitantanana ny toe-draharaha.
* Heatmap misy toerana izay anangonan’ny NSA, amely az internetes aminhony családok információs tsot matotra, fitaovana fandalinana goavana ampiasain’ny Egyesült Nemzeti Biztonsági Ügynökség (NSA). Forrás: The Guardian
Nandritra ny taona maro dia nampiasa fitaovana lehibe toy ny Facebook izahay, Google, ny rindrambaiko Microsoft ary ny fandrosoana haingana kokoa ny teknôlôjia dia nanosika ireo orinasa ireo hamaha ireo mpampiasa ireo kaontim-baovao rehetra azon amin.
Ary raha toa ny kormányember dia dia mety miezaka ny hifehy ny toe-draharaha, amin’ny tranga sasany dia izy ireo ihany no meloka amin’ny fahotana mitovy amin’izay sahirana amin’ny orinasa – fampidirana ny tsiambaratelo ary fanangonana tsy ara-dalàna ny angona tsy miankina.
Noho izany, inona no azontsika atao mba hiarovana ny fiainantsika manokana amin’ny aterineto? Ny valiny dia mitondra antsika bármely amin’ny lohahevitry ny VPN.
0.0.1 Szakértői tippek Ny mpamatsy sasany eny an-tsena dia mety tsy ho marina amin’ny fanolorana fanolorana azy. Mitaky izy ireo hanolotra servisy ara-pahasalamana bármilyen amin’ny toerana samihafa, most nyakában sasany amin’izy ireo dia tena virtoaly. Raha lazaina amin’ny teny hafa dia mety mifandray amin’ny mpizara bármilyen amin’ny firenena iray ianao, fa mahazo adressy IP nomena bármely amin’ny firenena hafa. Ohatra, ny mpizara bármilyen Sina dia mety ho bármire Etazonia. Ratsy izany satria midika izany fa mandalo amin’ny tambajotra maromaro bármely amin’ny faritra samihafa manrana izao tontolo izao ny data mandra-pahatongan’ny farany. Tsy misy antoka fa ny mpikirakira számítógépes bűnözők, maso-maso miafina miafina, na mpandika ny zon’ny mpamorona zon’ny mpamorona dia manana ny tanany amin’ny iray amin’ireo serivisy mpanelanelana ireo. Mia hialana amin’ity olana ity dia tokony hanao fizahana csara ny mpampiasa mba hanamarinana ny tena toerana misy ny VPN. Ireto misy fitaovana efatra azonao ampiasaina amin’ny: Ping teszt eszköz amin’ny CA App szintetikus monitor Traceroute Tool amin’ny CA App Synthetic Monitor A BGP Toolkit nem szereti a Sampana Electric Services szolgáltatást Parancssor eszköz a Windows CMD használatához – Hamza Shahid, a BestVPN.co Biztonság
1.1 Közös VPN-protokollok
1.1.1 Raha fintinina –
1.1.2 Fampitoviana protokollok VPN –
1.3 2. rétegű protokoll (L2TP)
1.4 3 – Fikirakira ny Fitrandrahana fandefasana fiara (SSTP)
1.5 4 – Internet Key Exchange 2-es verzió (IKEv2)
1.6 5 – Fikirakira an’ny alagút pont-pont (PPTP)
2 A titkosítási módszerek és az erősség
3.1 A felszerelés
3.2 Ny fifandraisana Internet
3.3.1 1- mivantana
3.3.2 2- izgalmas
3.3.3 3- játék
4 VPN famoahana matetika (GYIK)
5 Famaranana: Mila VPN ve ianao?
Ny mpamatsy sasany eny an-tsena dia mety tsy ho marina amin’ny fanolorana fanolorana azy. Mitaky izy ireo hanolotra servisy ara-pahasalamana bármilyen amin’ny toerana samihafa, most nyakában sasany amin’izy ireo dia tena virtoaly. Raha lazaina amin’ny teny hafa dia mety mifandray amin’ny mpizara bármilyen amin’ny firenena iray ianao, fa mahazo adressy IP nomena bármely amin’ny firenena hafa. Ohatra, ny mpizara bármilyen Sina dia mety ho bármire Etazonia.
Ratsy izany satria midika izany fa mandalo amin’ny tambajotra maromaro bármely amin’ny faritra samihafa manrana izao tontolo izao ny data mandra-pahatongan’ny farany. Tsy misy antoka fa ny mpikirakira számítógépes bűnözők, maso-maso miafina miafina, na mpandika ny zon’ny mpamorona zon’ny mpamorona dia manana ny tanany amin’ny iray amin’ireo serivisy mpanelanelana ireo.
Mia hialana amin’ity olana ity dia tokony hanao fizahana csara ny mpampiasa mba hanamarinana ny tena toerana misy ny VPN. Ireto misy fitaovana efatra azonao ampiasaina amin’ny:
Ping teszt eszköz amin’ny CA App szintetikus monitor
Traceroute Tool amin’ny CA App Synthetic Monitor
A BGP Toolkit nem szereti a Sampana Electric Services szolgáltatást
Parancssor eszköz a Windows CMD használatához
Maro ireo tolotra VPN és soha nincs manomboka mampihatra fepetra fiarovana bebe kokoa mba hahasoa ny mpampiasa azy. Nanomboka ny ankamaroany mba hanakanana ny fanangonana tahirin-tserasera sy ny fitiliana an-tserasera, saingy nanitatra ny fampidirana fanakanana imádnivaló ary amin’ny sasany aza dia vahaolana amin’ny viriosy.
Sarotra kely ny mamaritra ny fomba fiasa VPN pénz tsy misy ny antsipiriany ara-teknika. Na izany aza, ho an’ireo izay maniry for foto-kevitra fototra, VPN dia mamorona tonelina azo antoka avy amin’ny fitaovana ho an’ny mpizara VPN ary avy eo mankany amin’ny tranonkala manrantany.
Amin’ny antsipiriany bebe kokoa, a VPN dia mametraka fanambarana fifandraisana amin’ny fitaovana. Ity fititsika ity dia mamaritra ny fetran’ny fomba hivezivezin’ny angona avy amin’ny fitaovana amin’ny VPN server. Misy vitsivitsy misy protokollok VPN vitsivitsy izay mahazatra, na dia samy manana ny tombony sy ny tsy fahampiana azy aza ny tsirairay.
Na dia maro aza ny protokoll amin’ny fifandraisana, dia misy ireo endriny mahazatra izay matetika no tohanan’ny tsy miankina amin’ny marika VPN. Ny sasany dia haingana kokoa, ny sasany dia maivana, ny sasany azo antoka, ny hafa tsy izany. Ny safidinao dia miankina amin’ny fepetra takinao, me met ho ho fizarana tsara ho anao ny mifantoka raha toa ka mampiasa VPN ianao.
Raha fintinina –
SSTP: Tsy dia mahazatra loatra ary ankoatry ny fanoratana csara dia tsy manan-danja hanamora ny tenany.
Fampitoviana protokollok VPN –
Az OpenVPN egy nyílt forráskódú VPN-protokoll, ami nagyon jó. Nyílt forráskódú anyag azo atokisana amin’ny olona rehetra, izay midika fa tsy vitan’ny mpampiasa ara-dalàna ampiasaina sy hanatsara izany, fa ireo izay tsy manana fikasana lehibe dia afaka manara-maso izany amin’ny fahalemena sy manararaotra iza.
Na izany aza, nanjary nanjary indiai indító indíték az OpenVPN-ben, ami sok amin’ireo fiarovana azo antoka indrindra. Izy dia manhana nyer lenta indrindra, anizan’izany izay heverina ho ny ‘asam-panavotana’ 256-bit izay mitaky ny fanamafisana ny 2048-bit RSA, ary ny algoritmus XHUMX-bit SHA160 hash.
Noho ny loharanom-baovao misokatra dia nampifanaraka koa izy io amin’ny fampiasana amin’ny sehatra rehetra amin’izao fotoana izao, avy amin’ny Windows sy iOS amin’ny sehatra iraisam-pirenena hafa toy ny routers sy ny fitaovana madinika toy ny Raspberry Pi.
Ohatra – Ny sasany amin’ireo fitaovana notohanana NordVPN – Mariho hoe ny fitaovana tsirairay dia manhana ny tarigetrany manokana
Indrisy fa ny fiarovana elkerülve a mananát ny ratan-drivotra ary ny az OpenVPN dia matetika hita fa miadana be. Na izany aza dia betsaka kokoa ny fifanakalozam-barotra, satria ara-dalàna fa ny avoa kokoa ny akar’ny fampitomboana ampiasaina, ny fotoana bebe kokoa handraisana ny fizotran’ny data.
2. rétegű protokoll (L2TP)
Ny protokoll alagút 2 réteg (L2TP) no mpandimby azy Asio tadin-dokanga momba ny tondradrano (PPTP) with the 2. réteg továbbító protokoll (L2F). Indrisy anefa, satria tsy nahafeno fepetra ny famaha ny fifandraisana dia matetika nozaraina miaraka amin’ny fiarovana IPsec. Hatramin’izao, io fitambaran-javatra io dia heverina ho toy ny fiarovana sy tsy manana sérülékenységek hatramin’izao.
Zavatra sok mindennapi hanamarihana fa io protokoll, vagyis az UDP ao amin’ny seranan-tsambo 500, Izya midika fa ny tranonkala izay tsy mamela ny varotra VPN dia afaka mamantatra sy manakana azy mora foana.
3 – Fikirakira ny Fitrandrahana fandefasana fiara (SSTP)
Ny SICP (Secure Socket Tunneling Secure Socket) – átalakított aminosavak oly tsy dia fantatra loatra eo amin’ny olona tsy mahazatra, szent tena ilaina izy io satria efa nosedraina tanteraka, nosedraina ary nifatotra tamin’ny fampidirana Windows rehetra hatramin „i Vista SP1.
Tena azo antoka koa izany, am’ny fampiasana ny SSL / TLS 256-bit SSL / TLS ary ny 2048-bit bit. Fa Indrisy fa tompon’ny Microsoft ihany koa, noho izany dia tsy misokatra ho an’ny fanadinam-panjakana izany – indray, tsara sy ratsy.
4 – Internet Key Exchange 2-es verzió (IKEv2)
A Ny Internet Key Exchange 2-es verziója (IKEv2) a novolavolain’i Microsoft új, a Cisco-val készített játékaival együtt, ahogyan a protokoll másolja. Izy io koa dia mampiasa IPSec ho en’ny titkosítást. Ny fahaizany miverina amin’ny fampifandraisana ireo fifandraisana nagyon dia nahatonga azy ho ho mpitia eo amin’ny olona izay manararaotra azy noho ny fampielezana VPN amin’ny finday.
5 – Fikirakira an’ny alagút pont-pont (PPTP)
A NyTP protokoll alagút pont-pont (PPTP) ábrázolása amin’ireo dinôzôra eo amin’ireo protokollok VPN. ny protocoles taloha VPN. Na dia mbola misy aza ny fampiasana sasan, dia nidina an-dalambe io lalana io noho ny fiakarana midadasika be loatra amin’ny filaminana.
Manana izany sebezhetőség ary nalain’ireo olon-dratsy sy ratsy fanahy ela tany aloha, ka tsy mahafinaritra intsony. Raha ny kikötő, ny fahasoavana, ihany no maharesy azy. Araka ny nolazaiko ház, Ny fiarovana azo antoka kokoa dia ny fihenan-dàlana haingana kokoa dia ny mahita ny fihenanam-bahoaka.
A titkosítási módszerek és az erősség
Ny fomba tsotra indrindra hamaritana ny famaritana izay ezeket az eritreretina dia mety hanakorontana ny fampahalalam-baovao ka ny olona iray izay manana torolàlana amin’ny fomba nandraisanao azy dia diaak mandika izany amin’ny dikany tany am-piandohana.
Makà ohatra iray tokana – Kat.
Raha ampihariko amin’ny teny iray ny rakitra 256-bit, dia ho tototry ny lozam-pifamoivoizana tanteraka sy tsy széna sakanana izy io. Na dia ny szuperszámítógép mahery indrindra eto-tany aza dia hitondra an-tapitrisany an-tapitrisany amin’ny fiezahana hamaha io teny tokana io miaraka amin’ny famenoana 256 bites izay nampiharina taminy.
Ankoatra izany, ny ambaratongam-pehezantenim-panandevozana dia endriny, ka noho izany dia tsy manolotra ny antsasaky ny fiarovana ny famenoana 128-bit ny 256-bit. Na dia mbola marefo aza ny manam-rosszizana dia mino izany Ny kapila 128-bit dia ho tapaka tsy ho ela.
Ireo fomba fitahirizana sy tanjaka ireo dia ampiharina matetika, arakaraka ny fampiharana ampiasaintsika, toy ny mailaka, ny navigeur, na ny program. VPN-k amin’ny ankilany kosa dia mamela antsika hisafidy izay karazan-tsindrana tadiavintsika, satria ny karazan-tsika fidintsika dia hisy fiantraikany amin’ny fahombiazan’ny VPN.
Amin’izany fomba izany no ahafahantsika manitsy ny fampisehoana ny servisy VPN. Ohatra, nyugatiasan és könnyedén megcsinálta a jókedvű mafy ny hamandrihana ary ho vonona ny hanolotra haingam-pandehát. Ny hafa dia mety maniry haingam-pandeha ary manaiky ny sandan’ny fangarony kokoa.
Írja le a szöveget az imániában, ami a fanoratana, a satria rehefa, a közép-és a közeledő transzkakalau VPN ianao, az angona alefanao rehefa miezaka mamakafaka az internetes diamakivaky ny fifandraisana miafina VPN.
Efa lasa aho izao fikarohana, fitsapana ary fanandramana amin’ny VPN ho amyny ampahany tsara kokoa amin’ny herintaona. Na dia mety tsy ho manam-pahaizana ara-teknika amin’ny VPN aza aho, ezt meg kell tennie, anélkül, hogy az efa fantatro mihoatra noho ny tena tadiaviko momba ireo tolotra ireo.
A legfrissebb hírek a VPN-knek, amin az összes sehatra samihafa, az anisan’izany androidos mobil alkalmazások, a tranonkala mpamakin’ny navigátor és a misy szerényen amin’ny fampiasana hafa. Ny Sasany dianagaga nem igaz, hanem Sasany dia diso fanantenana.
Tsy maintsy hogyany aho fa amin’ny faran’ny andro, inona na inona fahaiza-manao amin’ny vokatra iray, dia tsy misy antony tokony hanesoran’ny orinasa iray amin’ireo orinasa ireo ny fanararaotana mpanjifa ratsy. Ary eny, tiako ny tsy fahaizana sy ny malaina ho játék ny “fanompoana mpanjifa ratsy”.
Ho am’ny ampahany betsaka, a fit fitnesz nataoko dia natao tamin’ny fampiasana loharanom-baovao VPN képeket tartalmaz VPN képeket napetraka eo amin’ny milina Windows iray. Tsara ny mahazatra, arit hitako fa matetika ny fitaovana ananantsika aty an-trano no mametra ny VPN mihoatra noho ny fanompoana.
Ny zavatra tena manan-danja nianarako momba ny fitaovana dia ny hoe raha mikasa ny hampiasa ny VPN mivantana eo amin’ny router ianao dia mila mahatsapa ny tena zava-dehibe iray – ny VPN anao dia tsy maintsy Manana processe kick-ass. Matetika izy ireo no voafetra amin’ny faran’ny ‘oh-my-God’ mpividy vezeték nélküli mpanjifa, ary na izany aza, dia voafetra ihany.
Ohatra, nanandrana VPN vitsivitsy aho tamin’ny fanandevozana Asus RT-1300UHP izay raha mety ho ho’ny ankamaroan’ny trano. Ez az alkalmazás lehetővé teszi a mandátumot az aza (LAN-on keresztül), ha 400+ Mbps sebességgel képes elérni a WiFi-t. Kanefa dia nahomby nyugtázza a 10 MB / s sebességű pénzt a VPN-hez. Tamin’izany toe-javatra izany, 100% -ban visszatérő processzor.
Az új karazana router mila ilaintsika dia anoiny ROG Rapture GT-AC5300 vagy Netgear Nighthawk X10 – Sarotra fa tsy ny nyerõgépek ankapobeny ho annyira ankamaroan’ny tokantrano. Na dia haingana aza ny hafainganam-pandehan’ny aterineto dia ro router no hijanona ho azy.
Ny fifandraisana Internet
Nanomboka ny fitsidihana VPN-k, amint a tolotra 50 MB / s, azaz nanoméh, akiky ny hafainganam-pandehan’ny adiresy – matematika, bár nincs manodidina ny 40-45 Mbps. Nifindra tany amin’ny andalana 500 Mbps aho tamin’ny farany, izay nahitako ny 80% amin’ny haingam-paneken’ny dokambarotra – amin’ny ankapobeny 400-410 Mbps.
Tamin’io fotoana ioyho aho no nifindra tamin’ny laharana haingana kokoa, the nahatsikaritra ny tolona VPN maro mba hitantana izany haingam-pandeha izany noho ny antony maromaro. Anisan’izany ny fitaovana ampiasainao, ny elanelana eo anelanelanao sy ny mpizara VPN izay nofidinao, ny sandan’ny dikan-teny tianao, ary ny maro hafa.
Tamin’ny voalohany dia fisedrana haingana indrindra izo, hitazonana rakitsoratry ny traikefa sy fanandramana Ihany koa. Raha vao nametraka fiticsika iray aho, dia nanomboka nandinika ireo tranonkala hafa horonantsary mivantana aho. Ho am’ny ampahany betsaka, hitako a VPN rehetra sign of the hormoam peo 4o UHD.
Nesorina ihany koa ny fandalovana, ary hitako fa nisy nandiso fanantenana kely. Hívja a rehefa mandeha haingana Internet Internet segítségével a VPN dia manjavona pénz tsy mampiasa vola miniatűr foto-drafitrasa tsara kokoa.
Akkor válassza ki a kezét (a farafaharatsiny tsy nylalao izay zava-dehibe ho annyan a fahombiazan’ny VPN), a nanamarika ny fotoana ping. Raha mpilalao te hanandrana mampiasa VPN ianao mba hiditra amin’ny lalao iray tsy ao amin’ny firenenao, mety ho diso fanantenana ianao. Nyissa meg a fényképet a ping-mit mitbo bebe kokoa noho ianao avy amin’ny VPN szerverhez, na dia haingana sy haingana aza ny hafainganam-pandeha.
VPN famoahana matetika (GYIK)
Mila Internet Internet elérése a VPN?
Ny VPN dianatao handrakofana sy hiarovana ny toerana sy ny data, saingy mbola mila fifandraisana amin’ny Internet ianao.
Toa ireo mpamatsy serivisy rehetra, ny orinasam-pifandraisan’ny VPN dia maniry anao hijanona miaraka aminy mandritra a fotoana maharitra, satria io no fidiram-bolan’izy ireo. Ny ankamaroan’ny mpanome tolotra VPN dia manolotra fehezan-dalàna isan-karazany toy is is bolana, isam bolana sy ny saisa. Matetika ny fotoana lava kokoa ny drafitra, ny mora kokoa ny isam-bolana isam-bolana, fa tsy maintsy handoa mialoha ny fifanarahana rehetra ianao. Manantena handoa eo anelanelan’ny $ 9 ka hatramin’ny $ 12 isam-bolana amin’ny fifanarahana isam-bolana, miaraka amin’ny fihenam-bidy hatramin’ny 75% ho an’ny fifanarahana maharitra.
Ity ny lisryry ny csara indrindra tolotra VPN izay iarahantsika mampitaha ny vidiny sy ny endri-javatra.
Írország VPN-je a natao voalohany sy lehibe indrindra hiarovana ny mombamomba anao ary hitazona hatrany ny angon-drakinao. Mampalahelo fa ny iram amin’ireo lafiny vokatry ny encryption izay ampiasaina amin’ny fiarovana ny data dia ny mampihena ny fifandraisanao amin’ny Internet. Amin’ny maha-fitsipika ankiby, manantena fa hahatratra mihoatra ny 70% amin’ny hafainganao ny hafainganana rehefa mampiasa VPN. Ny antony hafa játék ny halaviran’ny mpizara VPN, ny vesatry ny mpizara sy ny sisa dia hisy fiantraikany amin’ny hafainganam-pandehananao amin’ny Internet mampiasa VPN.
Manao ahoana nyhafaingam-pifandraisana misy VPN?
Ny ankamaroan’ny mpanome tolotra VPN, aminao aminao fa tsy hametra ny hafainganao izy. Na izany aza, misy toe-javatra hafa hodinihina ihany koa. Araka ny voalaza etsy szomorúság, manantena ny hahazo mihoatra noho ny ny hafainganam-pandehan’ny tsipika.
Amin’ny mety dia tokony ho tsotra tahaka ny fametrahana fampiharana iray ary miditra ny anaranao sy ny tenimiafinao. Avy eo ny zavatra tsy maintsy ataonao dia tsindrio bokotra iray ary hatambatra amin’ny mpizara VPN ianao. Mampalahelo fa tsy izany nincs vahaolana tsara indrindra ary ny fifandraisana sasany dia mety mila hatsaraina ho an’ny fampisehoana csara indrindra. Mpanome tolotra VPN maro an’isa toy NordVPN, Surfshark ary ExpressVPN dia hanana torolalana momba ny fomba fanaovana izany, tsy hahomby izay fotoana hifandraisana amin’ireo mpiasa amin’ny serivisin’ny mpanjifa.
Inona ireo fitaovana ezeketo atao ny mihodina VPN?
Miankina amin’ny mpanome serivisy VPN izay misoratra anarana aminao. Saika ny mpanome rehetra Windows, MacOS vagy Linux miaraka amin’ireo sehatra finday mahazatra. Betsaka koa no hanohana ny fampielezana ny router () raha misy vitsivitsy mifanentana amin’ny fitaovana mana-tarehy hafa toa ny Raspberry Pi.
Satria ny 256 bites titkosítás hampihenana ny fifandraisako betsaka, azo antoka ve amiko ny mampiasa 128-bit titkosítás?
Szerencsére vagyok, satria hatrizay dia matanjaka tokoa. Ny fanontaniana tokony hapetrakao amin’ny tenanao dia tokony ho izao: ‘Ohatrinona ny ahy ny nyi fiainana manokana sy ny fiarovana ám ami az Internet?’
Hatalmas a hoe mampiasa VPN iry?
Ny Vohikala sasany dia manandrana manakana ny mpisera VPN ary manana fomba ahafantarana raha misy fifandraisana miditra avy amin’ny mpizara VPN. Soa ihany, a VPN rajongók által létrehozott különféle számok, a fanoherana izay manampy. Tadiavo ireo mpanome fanampim-panazavana izay manolotra fanavahana, rajongói rajongók.
Azok a magánszemélyek rajongói böngészőjének VPN-je?
Nanandrana victornanana tranokala VPN vitsivitsy aho ary nahita fa ny ankamaroany dia lataka ao anatin’ny sokajy roa lehibe. Misy ireo izay maneho ny proxy ary manaparitaka ny fifandraisanao amin’ny mpizara iray, ary ny sasany izay miasa toy ny fifehezana navigateur amin’ny fampiharana VPN feno. Ity farany dia midika fa Mbola mila paikan’ny VPN napetraka ianao mba hampiasana ny fanitarana. Ny fampitomboan’ny tranokala VPN dia matetika tsy vP services.
Eny ary tsia. Na dia tsy manana lalàna manhitra ny fampiasana VPN ankamaroan’ny firenena, ny Sasany kosa dia mandrara izany. Amin’ny tranga henjana, legyen az új tűzoltó mandárság a VPP családon keresztül, és mindenki megtalálja a VPN mpampiasa nevét. Soa ihany fa misy firenena vitsy monja izay voararan’ny VPN hatramin’izao.
Miankina betsaka amin’ny fomba azo antoka amin’ny fampiasanao ny fifandraisana VPN sy mpanome izay nofidinao. Nisy tranga maro izay nosamborina ireo mpampiasa ny VPN taorian’ny nametrahany ny finoany tamina mpanome tolotra iray izay namadika ny paompy mpampiasa tamin’ny farany.
Famaranana: Mila VPN ve ianao?
Ny tsiambaratelo manokana ao anaty aterineto dia iharan’ny fahirano amin’ny teboka maro ary toa toran nitranga tamin’ny alina izany. Voaroaka ireo andro izay tsy maintsy hiahiahy momba ireo mpanao heloka bevava aterineto, fa ankehitriny koa dia tokony hanahy amin’ny orinasa isika Governemanta izay te hangalatra ny angon-drakitra noho izany antony izany – ny manara.
Mazava ho azy a fa tena mila VPN ankamaroany Miankina amin’ny firenena ao ianao, satria samy manana ambaratonga fandrahonana samihafa. Ny fanontaniana dia tsy zavatra azo valiana amin’ny eny tsotra na tsia.
Valanjavabatry ny varotra Globális VPN (arivo tapitrisa, USD) – Loharano: Statista
Na izany aza, avy amin’ny halu’ny fitomboan’ny ny hasarobidin’ny tsena VPN manrantany, Dia hilaza aho fa tena azo inoana fa mila imana na roa na impianti ianao. Fotoana izao no nanombohan’ny mpiserasera tsirairay nanokana ny fiainany manokana sy ny filaminana an-tserasera ho an’ny zom-pirenena ary hitady fomba ahazoana antoka ny fampahalalam-baovao.
Nahay tamim-pahatsorana tamin’ny fampiasana Internet izahay ny fomba iray izay ananantsika hatrany, fa ny mijery fotsiny nincs tsy misy ahiahy. Marina fa vir viriny sy malware nem hozható létre anay ho malina, sayy tsy niova firy.
Raha ny tena manokana dia tsapako fa fananganana ny VPN szolgálatot teljesít dinana manaraka ataon’ny mpampiasa aterineto tsirairay. Misy ny filana maika hanapotika ny saina fa tsy atahorana ny zavatra ataontsika ety anaty aterineto.
Raiso ohatra ohatra ny olona te-handeha an-tserasera ary hitady sary vitsivitsy amin’ny saka mahafatifaty. Ez egy nagyon izgalmas játék, amely mindenki számára ismert, mint az egészséges táplálkozás, az tiana / tsy tiany, a toerana ary zavatra maro hafa nangonin’ny manam-pahefana na fikambanana. Tsy ampy ve izany fiheverana mampatahotra izany ve mba hanerena ireo fihetsika?
خدمات اختصاصی خصوصی موایی (VPN) شرکت ها در حال تلاش برای جمع آوری داده
Inoiz nahi izan duzu zure bloga hastea? Edo, jada ez al dakizu hurrengo mailara
"Boiketlo ba Sechaba" hase feela buzzword és tsitsitseng ho sechaba. Ho ea ka seolohoho
WordPress dudarik gabe du A CMS plasztikus formájú sorozat. Arrazoi ona dago zergatik gehiago
Na efa nianatra tany amin’ny oniversite eo an-toanaana ianao، rehefa namorona tranonkala nandritra n
5 בלוגרים הסיבות הגדולות צריכות להוציא ספר עצמי בהוצאה עצמית
12 bodova korak po korak kako biste napisali svoj prvi internetski tečaj – I dio
متوقف کردن ترساندن خوانندگان از دور (نوشتن مقاله خود را ساده کنید)
میزبانی پی پال: 10 صفحه میزبان وب است که می توانید با پی پال
آیا خدمات مشتری شما از ارزش مشتری آگاهی دارد؟